Mas de Bruquet, ikhaya lakho eMontsec.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguXavier
I-Mas de Bruquet yindlu yasefama endala, ebuyiselwe kwaye yaguqulwa yaba yindawo yokuhlala. Ikhaya labakhenkethi apho unokonwabela indalo kwaye ufumane enye indlela yokwenza uKhenketho lwasemaphandleni. Yiza uzive ukuqina kwamatye, ukucaca kwesibhakabhaka, amandla ehlathi, ukukhanya kwelanga kunye nokunyanzeliswa kwamanzi, konke kwimo ecocekileyo. Ukusuka eMas de Bruquet ungonwabela izinto ezininzi zenkcubeko nezemidlalo.
I-Mas de Bruquet ijikelezwe yifama kunye nehlathi elincinci, elinemibono yeSierra del Montsec kunye ne-Terradets reservoir. Sineemephu ezineendlela ezithile kunye neenkonzo zabakhweli, abakhweli beebhayisikile nabakhweli bezithuthuthu.
IMas de Bruquet ikwisiqingatha somgama phakathi kwedama lase Terradets kunye nedolophu yase Llimiana. Ikwanti kodwa iqhagamshelwe kakuhle, ngaphantsi kwemizuzu engama-20 ukusuka eTremp, ikomkhulu lePallars Jussà, enazo zonke iinkonzo, iivenkile, isibhedlele, njl.
Idolophu yaseLlimiana, iCongost de Mont-Rebei kunye neMontsec Astronomical Park, ziindawo ezi-3 ezityelelwe kakhulu. Ukuhamba ngentaba ngumsebenzi owuthandayo weendwendwe zaseMas de Bruquet.
Inombolo yomthetho: HUTL-000155
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Llimiana